U-Instagram ukunika nini uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 17, 2019 0 IiCententarios 1370
Ukhuseleko ngaphakathi kwinethiwekhi yoluntu yenye yemicimbi ekhathazayo i-Instagram, ngale nto sithetha ukuba simahla kwi-SPAM kunye neeakhawunti ezingezizo. Ngale ndlela, yenza ukucoca apho kuphelisa amawaka eenkohliso kunye neeprofayili ezingasebenziyo. Kodwa ikwanalo elinye inyathelo xa i-Instagram ibeka i-tick eluhlaza okwesibhakabhaka, eyaziwa ngcono njengebheji eqinisekisiweyo.
Emva kweminyaka eliqela apho abasebenzisi bazibuze ukuba bafumana njani ukukhangela uphawu oludumileyo lweblue, ngoku sinempendulo enkosi ngeqonga uqobo elisibonise lona. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba wazi ukuba uza kuyifumana njani ibheji kufuneka wazi ukuba sithetha ukuthini xa sithetha ngayo.
Ithetha ntoni i-tick Instagram tick?
Xa sithetha ngebheji eqinisekisiweyo sithetha a uphawu oluncinci oluvela ecaleni kwegama leakhawunti kwi-Instagram kwi-injini yokukhangela kunye neprofayile. Ngale ndlela, kuyinto eqhelekileyo ukubona olu phawu kwiiprofayili zamanani oluntu, amagcisa kunye neebranti ezibalulekileyo, oko kuthetha ukuba isicelo esibonakalayo bubukho bokwenyani lomntu odumileyo okanye uphawu lwehlabathi alumeleyo.
Ukuba ungumsebenzisi we-Instagram kunye nezinye iinethiwekhi zentlalo ezifana facebook, Twitter, Tumblr, Akufanele kube sisihlandlo sokuqala ukuba babone olu hlobo lwebheji, kuba kumaqonga angaphambili sele ekhankanyiwe la makhalane okuqinisekisa asetyenziselwa uhlobo olufanayo lweakhawunti. Ukongeza, ezi mpawu zenzelwe ukubonelela ngokukhululeka ngakumbi xa kukhangelwa amanani oluntu okanye iimveliso ezinobukho kwisicelo kunye nokuphepha ukubiwa kwesazisi sabanye abasebenzisi be-Instagram.
Ngoku ukuba i-Instagram iguqule imigaqo yayo kancinci Ukuze bonke abasebenzisi baziva bekhululekile kwaye bakhuselwe ngendlela efanayo namanani kawonkewonke, siya kuchaza ngezantsi indlela yokufumana i-akhawunti.
Ndingasifaka njani isicelo sokuluhlaza okwesibhakabhaka kwi-Instagram?
Ngaphambili awungekhe ucele ibheji eqinisekisiweyo kwisicelo, kuba njengoko sele sitshilo, kuphela ngabantu abadumileyo kunye neempawu ezaziwayo ezinayo okoko i-Instagram itolike ukuba banethuba eliphezulu lokufakwa endaweni enye. Kodwa ngoku ujongano lukuvumela ukuba ucele ukuqinisekiswa, ukuba uyahlangabezana nemeko yokufikelela kwinani elithile labalandeli.
Kwizicwangciso ze-akhawunti ye-Instagram uza kubona ukhetho lwe "Cela uqinisekiso". Xa unokwenza isicelo, uya kufaka icandelo apho kufuneka unikezele ngedatha kwaye ngendlela efanayo unamathisele ifoto yesazisi esisemthethweni, ukuze isicelo sekhitchen eluhlaza sichazwe. Kodwa kwakhona khumbula ukuba isicelo sigcina ilungelo lokuqinisekisa okanye ukwala isicelo.
Ukongeza koku kungasentla, isicelo sivavanya ezi ndlela zilandelayo ukunika ibheji:
Yokwenyani: Iprofayili kufuneka imele umntu, okanye uphawu lwentengiso olubhalisiweyo.
Zodwa: Iprofayile kufuneka ibonakalise ubukho bomntu okanye ishishini elimeleyo. Ngale ndlela, ii-akhawunti ezifanayo ezifana ne-: @losmejoresmemes aziyiyo iakhawunti enokuqinisekiswa.
Gcwalisa: Iprofayile kufuneka ibe esidlangalaleni kwaye inomfanekiso weprofayile, i-biography yabo kunye nobuncinci bokushicilelwa.
Kuyaphawuleka: Iakhawunti kufuneka ivele kumntu odumileyo okanye uphawu kwaye iphandwe ngabasebenzisi abaninzi.
Kwaye nangona okwangoku abasebenzisi benkqubo esebenzayo ye-iOS abanokuthi basebenzise le ndlela intsha, iza kuphunyezwa kungekudala kwabanye, kuba i-Instagram izimisele kukhuseleko lwabo bonke.
Yintoni omele uyenze xa umntu ezenza ngathi ukwi-Instagram
Ayisi kuphela iibheji eziqinisekisiweyo kuphela komlinganiselo wokhuseleko abanayo abasebenzisi be-Instagram. Kuba kunokwenzeka ifom yoqhakamshelwano, kwimeko yokuzenza ongekhoyo kwiiakhawunti ezingenalo uphawu olublowu.
Kwimeko yokuba udlule kule meko, kuyacetyiswa ukuba ugcwalise iphetshana kwaye uthumele isicelo sesikhalazo kwi-Instagram. Kwakhona, enkosi kule fomu Unokuxela ezinye iiprofayili abathumela njengabantu kwi-Instagram.
Ukubonisa njani ukuba iprofayili iyinyani
Ngokwenene Akukho ndlela yokubonisa ukuba i-akhawunti inyani. Kodwa ngaphandle koku, abasebenzisi abaninzi abangenazo iibheji zokuqinisekisa basebenzisa amakhonkco kumaphepha anjenge-Facebook, okanye iphrofayile ye-Twitter ukuze angqinisise iiakhawunti zawo.
Kwelinye icala, sinabasebenzisi abagqiba kwelokuba babeke igama elithi "Igosa" ecaleni kwegama labo, kodwa akucetyiswa ukwenza njalo. Oku kungenxa yokuba nabani na unokwenza okufanayo kwiprofayile yobuxoki kwaye aqhubeke nokuqhatha abalandeli babo.
Sinokuthi xa i-Instagram ibeka i-tick eluhlaza kuwe Ingaba luncedo olukhulu xa usenza uphando kwi-Instagram. Kwaye ukuba iqhubele phambili inkqubo yezokhuseleko xa ijongene nolusu. Kungenxa yoko le nto siza kugxila kukukufundisa indlela yokwenza le nkqubo ingezantsi.
Inyathelo ngenyathelo xa i-Instagram ibeka i-tick eluhlaza okwesibhakabhaka
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena kwicandelo le-Instagram apho bakubonisa khona iifom ezininzi onokuzisebenzisa kwimeko yobuqhetseba. Kwakhona, ngaphandle kokuba une-600k, ukuzama ukubonisa ukungalingani kwe-akhawunti yakho kuphela kwendlela onokuthi ubenakho ukuyenza uqinisekiso, Ngaphandle kokulinda isicelo ukuba sikuphawule.
Inqanaba elilandelayo kukugcwalisa amasimu aza kuvela kwicandelo lokugqibela: igama lakho elipheleleyo, idilesi ye-imeyile, ubudlelwane onabo nomntu ongenguye, igama elipheleleyo lomntu abamfakisayo, igama abalisebenzisayo kunye negama elipheleleyo kwiakhawunti olixelayo.
Emva kwexesha ungalayisha amaxwebhu ukuze ulungelelanise isazisi esikucelwe ngu-Instagram ukuba uya kuskenwa. Emva koko, ucofe ukukhangela kwaye ufake umfanekiso woxwebhu lwakho, ngokukhethekileyo ukusuka kwikhompyuter kuba iselfowuni kunye nethebhulethi ihlala ihambisa iingxaki.
Nje ukuba wenze amanyathelo angaphambili, kuya kufuneka uchaze kwiqonga ukuba kutheni na kufuneka uqinisekise iprofayile yakho ye-Instagram nge-tick eluhlaza okwesibhakabhaka. Kwaye nangona abaninzi becinga ukuba bayishiya ingenanto, ndikwazisa ukuba yintsimi enyanzelekileyo, yokuba xa uzama ukubeka abalinganiswa abangahleliwe akukho nto ifezekisiweyo.
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokujonga iakhawunti
Kukho izinto eziguquguqukayo ezinokongeza amanqaku endaweni yakho ukuze ufumane le bheji yeakhawunti eqinisekisiweyo. Ngapha koko unomdla wokufezekisa imikhaza ye-azuUkuba ungomnye wala matyala alandelayo:
Ukuba iphepha lenkampani liqinisekiswe ku-Facebook kwaye lihambelana ne-Instagram yakho.
Ukuba udlula kwimeko yokuba kukho iiakhawunti ezininzi ze-Instagram ezonga i-akhawunti yakho.
Ukuba neakhawunti enabalandeli abangaphezu kwe-400k.
Kwaye ukungqinisisa kwamanyathelo amabini kuyasebenza kwi-Instagram yakho.
Izinto eziluncedo xa unophawu olublowu
Abantu abaninzi bafuna ukufumana ibheji yokuqinisekisa kungekuphela kukhuseleko olunokubanika iiakhawunti zabo, kodwa kuba ikwagxininisa ekuthandweni kunye nakwimeko ngaphakathi kwesicelo. Kungenxa yokuba i-tick eluhlaza efunwa kakhulu ayikho lula ukufumana kwaye kuya kufuneka wenze inkqubo ukuze i-Instagram ithathe isigqibo sokuyinika okanye hayi.
Ngakolunye uhlangothi, Inani labalandeli obafumanayo ngokwenza ukuba imikhaza eluhlaza iphindaphindeke kakhulu. Kwaye ke abanye abasebenzisi benza iiprofayili ezingezizo ukwenza i-Instagram bakholelwe ukuba bayabalingiswa kwaye iiakhawunti zabo zifuna ukhuseleko. Kodwa i-algorithm yesicelo ihambele phambili kangangokuba ibone ngokulula inkohliso.
Ukuba ufuna ukufumana ukuqinisekiswa kweakhawunti yakho, kuyacetyiswa ukuba ulayishe imixholo esemgangathweni kwaye ungowokuqala kakhulu. Ngokuphathelene noku, kuyenzeka ukuba utsalane umdla wabaphulaphuli kwangaxeshanye ukongeza abalandeli kwiprofayile yakho. Ukuba luphawu oluthile oluqalisayo, ungazisebenzisa zonke izixhobo esikunikwa sisicelo ukuze ukwazi ukuxhaphaza ngokupheleleyo iphulo lakho lokuthengisa kunye nokufumana abantu abaninzi abathanda imveliso yakho.
Ngamaxesha onke thintela ukulayisha kakhulu ababukeli bakho kodwa ungalali ngento oyilayishayo, gcina isingqisho enokulandelwa ngumntu wonke. Kuba oku kunokubangela ilahleko yabalandeli.
Ukuqukumbela sinokuthi ukwazi xa i-Instagram ibeka i-tick eluhlaza okwesibhakabhaka kuluncedo ukuba nombono ocacileyo wokuba ungayifumana njani. Ngendlela efanayo eyenzeka ngayo nezinto ekufuneka ziqwalaselwe xa usenza isicelo. Kwelinye icala kukho indlela onokuthi ubonise ukuba iakhawunti yakho iyinyani.
Ukuba ucinga ukuba uhlangabezana nazo zonke ezi meko kwaye ulungele ukufaka iqela leeakhawunti ezingqinisisiweyo, gqibezela inkqubo, nokuba le Andiqinisekisi ukuba ungayifumana ibheji ungalahlekelwa yinto ngokuzama ukuphuma nokuthandabuza.
1 Ithetha ntoni i-tick Instagram tick?
2 Ndingasifaka njani isicelo sokuluhlaza okwesibhakabhaka kwi-Instagram?
3 Yintoni omele uyenze xa umntu ezenza ngathi ukwi-Instagram
3.1 Ukubonisa njani ukuba iprofayili iyinyani
4 Inyathelo ngenyathelo xa i-Instagram ibeka i-tick eluhlaza okwesibhakabhaka
4.1 Izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokujonga iakhawunti
5 Izinto eziluncedo xa unophawu olublowu
I-Instagram iya kususa nini ngokuthe ngqo?